Lusius Quietus, mukuru weRoma wekuAfrica akatanga uyo akafuridzira iyo firimu Gladiator - Afrikhepri Fondation
Lusius Quietus, mukuru weRoma wedzinza reAfrica uyo akafuridzira iyo gladiator bhaisikopo
Mukuru Lusius Quietus
Lusius Quietus aive mukuru weKamit weRoma, gavhuna weJudhiya muna 117. Hondo yeKitos yakatumidzwa kudaro zvichireva Quietus. Romanized muchinda wechiMoor uyo akazove mumwe wevakuru vakuru veEmperor Trajan pakutanga kwezana ramakore rechipiri renguva yechiKristu. Aive achibva kudunhu reRoma reMauretania Tingitane (yanhasi yeMorocco) uko baba vake vaitungamira dzinza rakakura revanotama. Vapedzisira varwira maRoma panguva yekumukira kweMoor kwakatungamirwa naAedemon mushure mekunge Caligula auraya Ptolemy weMauretania, mwanakomana waMambo Juba II. Somubayiro webasa rake, akapiwa mubayiro wokuva mugari weRoma.
Mudiki Lusius akawana dzidziso yeRoma uye akanyoresa muuto reumambo paakanga akura zvakakwana kuti azviite. Akamuitira iye mutsva webato (vexilatio) wevatasvi vemabhiza akanyorwa chete nemaMoor kubva kurudzi rwake rwekutanga. Varume ava vaive vakazvipira chose kwaari vaive nehunyanzvi hwekutasva mabhiza avo vasina kupfeka uye vane ruzivo rwakakura rwekurwa munzvimbo yakatenuka, izvo zvaibvumidza mutungamiri wavo kusimuka nekukurumidza pachigaro sekureva kwemaoko ake. nemauto eRoma.
Kana kwaakabva nekune dzimwe nyika kana kukwezva kwaLucius mukurumbira uye hupfumi hazvina kumupa kunetseka pakutanga. Asi iye waakaratidzira kune vakanaka pabonde vanopedzisira vamuunzira mamwe matambudziko. Mushure mekusimudzirwa pachinhanho chehutongi hweRoma naDomitian nekuda kwemauto ake ehondo, akatonyadziswa kwenguva yechinhu chetsika.
Yakanga iri nguva yekumuka kwehondo paakafunga kurwisa maDacian (muRomania yanhasi) kuti Emperor Trajan haana kungoyeuchidza Lucius kuRoma (101) asi akatoita kuti ave mumwe wavo vashandirwi vepedyo, akange akafadzwa zvakanyanya nehushingi hwake uye nehunyanzvi hwekurwa. Uku kwaive kusarudza kwehungwaru, sezvo kwaive kushinga kwevatasvi vemabhiza kwakatungamirwa neMoor kwakatendera maRoma kutora guta guru reDacian, Sarmizegutesa uye nekudaro vachiunza mambo muvengi kuzobata. Lucius akazvifukidzawo nekubwinya panguva yemushandirapamwe wechipiri waDacia (104-106) uyo wakazopera nekukunda kwakazara kwevaRoma uye kuwedzerwa kwenyika yakakundwa.
Muna 113, Quietus akatanga kuenda kuMabvazuva ari padivi paTrajan uyo aive nechinangwa chekumutsidzira chiito chaAlexander Mukuru nekutora Persia yaidzorwa nevaParthia. Mushure mekupedza kukunda kweArmenia zvakachipa, Trajan akatumira shamwari yake pamwe nemutungamiriri wehondo Lusius kumusoro kwavatasvi vake vemabhiza vechiMoor kuti vatevere dzinza reChipiri. Varume vaLusius vakapfuurira vakadzika kupinda munyika yevavengi kusvika pamoyo weMedia uye vakabudirira kupedza basa ravo (114). Kudzokera kuna changamire wake, Quietus akapinda mukukunda Mesopotamia, ipapo, pakamuka mhirizhonga yakakura muJudhiya-Parthian mhiri kwenyika, ndiye aive nebasa rekudzvinyirira. Izvo zvaakaita munguva pfupi nehutsinye hunofanirwa kunge hwakaratidza midzimu yenguva iyoyo, zvisinei ajaira zvechisimba zvehondo.
Lusius akaitawo basa rekudada kuvaRoma nekutora akakosha anopandukira maguta eSyria eNisibe, Singara neEdessa. Edessa waakange aparadza kunheyo uye mambo wavo, Abgar VII, aive auraya nekudaro achibvumira mauto kuyambuka Yufratesi pasina njodzi (116).
Nemhaka yekuti mambo anga achiri kumuda uye achiziva utsinye hwake hwaanozivikanwa, akamugadza gavhuna weJudhiya nechinzvimbo chemumiriri. Zvaive kwaari kuti abvise kusagadzikana kwemaJuda akamukira avo vasina kumira kutyisidzira hurongwa hweRoma mudunhu iri. Mutsva mutsva wakatanga nekubata Lydda pakapfigirwa vapanduki vechiJuda vekupedzisira, vese vakaurayiwa kwekupedzisira. Ipapo akabva achengeta zvisungo zvevapambi vairamba vachitambudza nyika vasati varatidzira kukunda kwake nekuisa chifananidzo chamambo mumatongo eTembere yeJerusarema.
Nyeredzi inoyevedza kusvika zvino yaQuietus yakaramba nguva pfupi yapfuura kufa kwaTrajan apo Hadrian paakakwira pachigaro (Nyamavhuvhu 117). Chido chekupedzisira chaTrajan chekuti shamwari yake yakatendeka mumaoko, Quietus, semutsivi wake, haina kuzadzikiswa. Mudzimai wake akanyengetedza mauto kuti, asati afa, Trajan akange atora semwanakomana ndokugadza hama yake Adrian semutsivi. Godo raAdrian zvirokwazvo chichava chimwe chezvikonzero zvikuru zvekudzingwa kwaQuietus, uyo aive mukuru kuna Emperor mukukodzera nekubwinya.
Asvika muRome, Hadrian, uyo aizviziva kuti aityisidzirwa nevakwikwidzi vazhinji akafunga kuvabvisa. Lusius akabva adzingwa kubva pabasa rake, akarangarirwa kuItari nekunyepedzera uye akaurayiwa nemamwe maseneta matatu akakosha mune yakazodaidzwa kuti inyaya yevanamwari vana (zhizha 118).
Kumukira kwakatanga pakarepo muMauretania uko Lusius Quietus anga aramba achizivikanwa kwazvo uye Hadrian aifanira kutumira mumwe wevakuru vake vakanyanya, Marcius Turbo, ikoko kuti vakunde vapanduki.
Saka zvakazopera sekutanga kwazvakaita, ndiko kuti muropa, basa remuchinda weMoorish Lusius Quietus.
Quietus nevatasvi vake vakatasva mweya paTrajan's Column muRome.
Iyo nyaya yemunhu uyu inonongedzera kune gamba remufirimu Gladiator.
AIDS, chimbo chekutonga nekuderedza vanhu veAfrica?
Chronological History of the People of Kama (Chikamu 2)
Iyo Shock Strategy - Zvinyorwa (2010)
Kurovererwa kwaJesu muIslam - Zvinyorwa (2012)